Rosé ရဲ့ solo debut အတွက် ထပ်တူ​ပျော်ရွှင်​အား​ပေးခဲ့ကြတဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်များ | News Bar Myanmar
Rosé ရဲ့ solo debut အတွက် ထပ်တူ​ပျော်ရွှင်​အား​ပေးခဲ့ကြတဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်များ
မတ်လ ၁၂ ရက်​နေ့မှာ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé ရဲ့ တစ်ကိုယ်​တော်ပွဲဦးထွက်အတွက် စာနယ်ဇင်းပွဲကို အွန်လိုင်းက​နေ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲမှာ Rosé က သူမရဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ သူမအတွက် ဘယ်​လောက်အ​ရေးကြီးပြီး သူမကို ဘယ်​လောက်ထိ အား​ပေးကူညီခဲ့လည်းဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Rosé က “အခုချိန်ထိ ၄ ​​ယောက် အတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့အရာ​တွေကို တစ်​ယောက်တည်း လုပ်​နေရတဲ့အတွက် လုပ်ရမယ့် အလုပ်​တွေနဲ့ တာဝန်ယူမှု​တွေ ပိုများလာပါတယ်။ အဲ့ဒါ​ကြောင့် အဖွဲ့ဝင်​တွေရဲ့ ​​နေရာလွတ်ကို ပိုခံစားမိလာတယ်။ တစ်ကိုယ်​တော် လှုပ်ရှားမှု​တွေအတွက် ပြင်ဆင်ရင်း BLACKPINK အဖွဲ့လိုက် လှုပ်ရှားမှု​တွေက​နေ အများကြီး ပညာရခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိလာတယ်။
အတူတူကြီးပြင်းလာပြီး အတူတူ သင်ယူခွင့်ရတာ ဘယ်လောက်ထိ ထူးခြားတဲ့ အရာလည်းဆိုတာကို သိလာတယ်။ အဖွဲ့ဝင်​တွေရဲ့ တန်ဖိုးကို ပိုပြီး နားလည်လာတယ်” လို့ ဆိုပါတယ်။ ထို့​နောက် သူမက “အဖွဲ့ဝင်တိုင်းက ကျွန်မကို အား​​ပေးကြတယ်။ အဲ့ဒါ​ကြောင့်လည်း အား​ပေးမှုက အရမ်းအ​ရေးပါတယ် ဆိုတာကို ​တွေးမိလာတယ်။
Jennie က ကျွန်မကို ချစ်စရာ လက်​ဆောင်​လေး​တွေ​ပေးခဲ့ပြီး ကျွန်မရဲ့ ​ခွေး​လေးနာမည်ပါတဲ့ ဟန်းချိန်း​လေးတစ်ခုကို လုပ်​ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ video call လည်း ​ပြောဖြစ်ကြတယ်။ Jisoo က သီချင်းက အရမ်း​ကောင်းတာပဲ သူအရမ်း​ပျော်တယ်လို့ ​ပြောခဲ့ပြီး ဒီတစ်ကိုယ်​တော် လှုပ်ရှားမှု​တွေမှာ ကျွန်မလုပ်ချင်တာ​တွေ အားလုံး လုပ်နိုင်ပါ​စေလို့ ဆု​တောင်း​ပေးခဲ့တယ်။
Lisa က​တော့ music video ကို ကြည့်ပြီး သီချင်းနား​ထောင်ပြီးတာနဲ့ ‘အရမ်းမိုက်တာပဲ’ လို့ ဝန်ထမ်း​တွေကို လိုက်​ပြောခဲ့တယ်လို့ ​ပြောပါတယ်” ဆိုပြီး အဖွဲ့ဝင်​တွေရဲ့ အား​ပေးမှုအ​ကြောင်းကို ​ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ မျက်လုံးအား​ကောင်းတဲ့ BLINK ​တွေက တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်​နေစဉ်မှာ Jisoo က ဝင်ကြည့်ပြီး “Chaeyoung ❤️” (Rosé ရဲ့ ကိုရီးယားအမည်) လို့ ရိုးရှင်းတဲ့ comment တစ်ခု ဝင်​ရေးသွားတာကို သတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။
​ဒါဟာ Jisoo ကလည်း သန်းချီတဲ့ BLINK ​တွေနဲ့အတူ Rosé ကို ဘယ်​လောက်ထိ စိတ်ဝင်တစားကြည့်​နေလဲ​ဆိုတာကို ထင်ဟပ်​စေခဲ့ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအတွင်းမှာ Rosé က ကျန်တဲ့ အဖွဲ့ဝင် ၃ ​ယောက်က သူမဆီကို ​ပေးပို့ခဲ့တဲ့ အား​​ပေးစကား​တွေကို အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ဖတ်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ Jisoo က “BLACKPINK ရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ ငါတို့ရဲ့ အသံပါရမီရှင်​​လေး Rosé. Chaengie! တစ်ကိုယ်​တော်ပွဲဦးထွက်အတွက် အချိန်အကြာကြီး ​စောင့်ခဲ့ရတယ် အဲ့ဒါ​​ကြောင့် လုပ်ချင်တာအကုန်လုပ်ပါ။ BLINK ​တွေနဲ့အတူ ​ပျော်စရာ အမှတ်တရ​တွေ ဖန်တီးနိုင်ဖို့ ​မျှော်လင့်ပါတယ်” လို့ ​နွေး​ထွေးစွာ ​ရေးသားထားပါတယ်။ Lisa က​တော့ ပရိသတ်​တွေကို “ကျွန်မရဲ့ အမြွှာဖြစ်တဲ့ ချစ်စရာ Rosé ရဲ့ တစ်ကိုယ်​တော်သီချင်းကို အများကြီး ချစ်​ပေးကြပါ” လို့ BLINK ​တွေကို ချိုသာစွာ ​မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
Jennie က​​တော့ Rosé ရဲ့ ​​မှော်ဆန်တဲ့ အသံကို ကမ္ဘာကြီးကို ချပြဖို့ ဘယ်​လောက်​စောင့်ခဲ့ရလဲဆိုတာကို သိ​ကြောင်း၊ သူမက “Gone” နဲ့ “On The Ground” သီချင်း​တွေကို ပထမဆုံး နား​ထောင်ဖူးတဲ့သူဖြစ်​​ကြောင်း၊ ထုတ်​ဖော်​ပြောထားပြီး သူမလိုပဲ အားလုံးက ဒီသီချင်း​တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်မှာဖြစ်​ကြောင်း​ ယုံကြည်ချက်ရှိစွာ ​ပြောထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့ Hank (Rosé ရဲ့ ​ခွေး​လေး) ကို ဂရုစိုက်ဖို့ မ​မေ့ပါနဲ့လို့လည်း ​မှာထားပါ​သေးတယ်။
ဒါတင်မက​သေးပဲ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ Rosé ရဲ့ သီချင်းထွက်တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် Instagram Story ​တွေမှာ post တင်ပြီး Rosé အတွက် ဂုဏ်ယူ​ကြောင်းနဲ့ အား​ပေးစကား​တွေ​ပြောခဲ့ကြပါ​သေးတယ်။ ဒါ​တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်​တွေဟာ သူမတို့ရဲ့ main vocalist အတွက် ဘယ်​လောက်ထိ စိတ်လှုပ်ရှား​ပျော်ရွှင်​နေတယ်​ဆိုတာကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ Rosé ဟာလည်း အဖွဲ့ဝင်​တွေရဲ့ အား​ပေးမှု​တွေနဲ့အတူ တစ်ကိုယ်​တော်လှုပ်ရှားမှု​တွေကို ​အောင်မြင်စွာ လုပ်​ဆောင်နိုင်သွားမှာ မလွဲမ​သွေပါပဲ။
Next သူမကို လိုက်လံ အတုပဆုံး BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်ကို ထုတ်​ဖော်​ပြောကြားခဲ့တဲ့ Lisa »
Previous « “A Tale of Thousand Stars” ထဲက မင်းသားချော Mix Sahaphap အကြောင်း တစေ့တစောင်း